ठ’कुरी यु’वती द’लितसँग विवाह गर्दा शिक्षक दम्पत्तीको उ’ठिबास!:: Mero Desh
ठ’कुरी यु’वती द’लितसँग विवाह गर्दा शिक्षक दम्पत्तीको उ’ठिबास!
Published on: १२ श्रावण २०७८, मंगलवार २३:२१
काठमाण्डौं।ठकुरी यु’वती रा’जिखुसि द’लितसँग विवाह गर्दा शिक्षक द’म्पत्तीको उ’ठिबास!बैत’डीको शि”वनाथ गाउँपालिका–६ कानलीका क’रन राना र उनकी श्री’मती राजु राना दुवै जना शिक्षक हुन् । करन हिरापुर माविमा र निमावि राहत कोटा अन्तर्गत अनि राजु कृष्ण निमावि”मा
बालविकास कोटामा कार्यरत थिए । दुवै जना शिक्षण पेसा मा कार्यरत रहेकाले पनि उनीहरूको आ”र्थिक अवस्था राम्रै थियो । राम्रैसँग जीविको “पार्जन गर्दै आएका थिए ।
तर, उनीहरूको जीवनमा ६ वर्षअघि एउटा यस्तो घटना भयो कि जुन घटनाका कारण उनीहरू गाउँ र समा’जबाटै
वि’स्थापित बन्न पुगे । समाजले उनीहरूमाथि जुन आरोप लगा’एको थियो । त्यसमा कुनै पनि सत्यता नभ”एको उनी हरूको दाबी छ । तर, समा’जले उनीहरूको प्र’स्टीकरण सुन्न चाहेन । फलतः निर्दाेष भएको प्रमाण पेस गरि’रहँदा पनि समाजले उनीहरूको कुरा सुन्न चाहेन ।त्यसपछि राना
दम्पत्तीलाई झु’टा मुद्दा लगाइयो, जागि’रबाट निकालियो । त्यतिले मात्रै नभएर गाउँबाटै निकाला गरियो र अ’न्तमा घर’समेत जलाइयो ।सोच्दै नसोचेको आप”त्ति आइलागे पछि एउटा लयमा चलि”रहेको उनीहरूको जीवन नै बिथो लियो ।२०७२ सालको चैत महि”ना । यही साल र महिना
देखि उनीहरूको जीवनको लय’ बि’ग्रिएको हो । स्थानीय गोकर्ण चन्द’की छोरी पूजा र एक जना द’लित युवक”ले २०७२ माघमा प्रेम विवा’ह गरेका थिए । प्रेम विवाह पछि उनीहरू चार म”हिनासँगै पनि बसे । तर, पूजाको द”लित युवकसँग विवाह हुनुमा करणकी श्री”मती राजुलाई दोष
लगाइयो । स्थानी’यको यो दोष उनीहरूले स्वीकार गरेनन् विवाद बढ्दै गयो । त्यस पछि चैतमा पूजा’का बाबुसहित गएर पू’जालाई फिर्ता ल्याए । केटा केटी दुवै लाई जिल्ला प्रहरी का”र्यालय बैतडीमा उपस्थित गराइयो । प्रहरी कार्या लयमै केटीका बाबु, स्थानीयवासी र करन रा’नाकै अगाडि
उनीहरूले आफूले स्वेच्छाले प्रेम विवाह गरेको बताए एक अर्काबिना बाँ’च्नै नसक्ने सम्मको कुरा सुनाए । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिए को छ। यो खबर मा तपाईको टिप्पनी तर्क सल्लाहसुझाव भए कमेन्ट गर्नु होला